Tuesday April 28, 2015 - 02:03:48 in Wararka by Super Admin
Waxaa magaalada Stockholm ee wadanka Sweden lagu soo dhaweeyay gudoomiyaha Ahlusunna Waljamaaca Mucalim Maxamuud Sh. xassan oo safar gaaban ku soo gaaray wadanka Sweden.
Xafladdaan lagu soo dhaweeynaayay Mucalimka ayaa culimadii ka hadashay waxaa ka mid ahaa Sh.Muxyidiin Xassan ayaanle oo ku dheeraaday taariikhda Mucalim Maxamuud Sh.Xassan iyo halgankii uu u soo galay fidinta diinta iyo difaaceedaba.
waxaa sidoo kale isna goobta ka hadlay Mucalim Saciid oo si weyn ugu ammaanay sheikha difaaca diinta iyo dariiqada.waxaa sidoo kale isna goobta ka hadlay Sh. Daahir oo si weyn ugu duceeyay sheikha iyo dhammaan kasoo qayb galayaasha.
Gunaanadkii Xafladda ayaa waxaa qudbad dheer ka jeediyey Mucalim Maxamuud Sh.Xassan oo kawaramay guud ahaan xaaladda wadanka Soomaaliya gaar ahaan Gobolada dhexe, Sheikha ayaa sidoo kale waxaa uu u mahad celiyey dhammaan axbaabtii sida qiima badan u soo dhaweeysay iyo mashaa,iqdii goobta ku sugnayd.
xafladda ayaa waxaa ay ku soo gabagaboowday farxad iyo raynrayn.